Rwendo rwekuvhima kwebasa | Mabasa - Basa - Kufamba Antony Raj Jayamani muDubai
Rwendo rwekuvhima basa - Ita zviso pasi apa pane chikamu chimwe!
Iye zvino kudzokera kune chinangwa chikuru chekushanyira kwangu, basa rokuvhima. Mumavhiki maviri ndakacherechedza kuti mamiriro acho haasi seakavimbiswa, ndinofanira kutsvaga basa iri ndichigara ikoko. Zvakanga zvichityisidzira ini asi chokwadi chakanga chisingadi kurambwa. Mushure memavhiki maviri ekucherechedza, ndaive nechokwadi chekuwana chimwe chinhu nokukurumidza uye ndaida kutaura zvakanaka kune vevanhu vangu nokukurumidza. Ndakanga ndisingadi kuva mutoro kwavari kunyange vasina kumboita kuti ndinzwe sokuti, ndakanga ndisingafari. Vakaparadzira CV yangu mumasangano avo ehutano uye masayenzi, vakagadzira mamwe mapepanhau kubva kwandinofanira kunyorera mabasa akakodzera kwandiri anoenderana nehuwandu hwangu. Yakanga ichangova kutanga.
Rwendo rwebasa ruchivhima raida nzira yekukurukurirana, nokuda kwechinangwa ichocho vanhu vangu vakatenga vakatengesa nhare yefoni, imwe kambani yakangotangwa panguva iyoyo yaiva DU. Sezvo ndakanga ndiri pakushanyira visa, saka, zvingave zvakaoma kwandiri kuti nditenge sim. Dai ndakanga ndasarudza mambure ndingadai ndakaenda Etisalat. Sezvo Etisalat ndiyo chete yaive yakawanika nhare mberi kweiyo, iyo yakanga yavaka musangano wayo yose kuMiddle East. Asi mauto angu akasarudza DU nokuda kwangu uye yakanga yakafukidzira zvese zvandaida zvinokosha zvekukurukurirana. Saka zvakanga zvakanaka kwandiri.
Panguva iyoyo ndakanga ndiine ruzivo rwekushanda kwekutengeserana chete kwekufambisa, naizvozvo ndangariro yangu yaiva yekuwana basa mundima imwe chete. Nharaunda yangu yakatarwa yaiva Abu Dhabi apo ini ndaigara ikoko. Sezvo UAE ndiyo nyika yakashanyirirwa uye mabasa evashanyi nguva dzose ari pakakwirira kwayo saka ndakanga ndisina chokwadi kuwana basa. Nokuda kweizvi, ndakashanyira Malls, Suqs nzvimbo dzekutengesa apo mahofisi ejeri rekufamba akawanikwa. Ndakagovera CV yangu semapepa kana mapurisa. Zvaiva zvinetso uye zvisinganzwisisiki kwandiri kana ndikakumbira nhoroondo basa mubasa rokutengesa iro randakanga ndiine ruzivo, ndakabvunzwa pamusoro pekodzero yakakodzera yandakanga ndisina uye yekutengesa apo kukodzera kwakanga kusiri nyaya asi chiitiko chakanga chiri mubvunzo, chandakanga ndisina J. Chero zvaive mhinduro yakajairika kune zvandinoshandisa.
Mushure mokunge ndava kukanganisa mukuedza kwangu kwokutanga ndakashandura nzira yangu, uye ndakasimbisa nzvimbo yangu yekutsvaga uye ndaitsvaga basa muminda kunze kwekutengeserana. Imwe yebhizimisi inobudirira yaiva yemakambani ekutsinhanisa, ayo anotengesa mumapoka akawanda. Kufamba, kutengesa mari uye zvivako zvaiva mabhizinesi avo makuru. Ndakaedza rombo rangu asi nengozi mhinduro yacho yakafanana.
Ndakanga ndichigumburwa zuva nezuva, hapana chakanga chiri kuitika sezvandaitarisira. Ndaiwanzoenda zuva rega rega kuresitorendi yekombiyuta kushandura paIndaneti, kutumira email kuCV yangu, kutarisa mitsva. Ndakaenda kuDanata, hofisi yeEmirates kuAud Dhabi mune tariro yekuwana mhinduro yakanaka. Mukupisa kunopisa kweAud Dhabi ndakafamba-famba mumigwagwa. Ndakakanganwa chikonzero ikozvino asi kuziva chinangwa, icho chaiva chokuva chikamu ichi chinzvimbo chikuru.
Ndakaparadzira nzvimbo yangu yekutsvaga kubva kuAud Dhabi kune dzimwe nyika dzeUAE Ndakashanyira Sharjah, Al Ain, Ras Al Khaima uye Dubai zvechokwadi. Ndakaona, kunze kweAbrahama Dhabi, Dubai uye Sharjah mikana yekuwana basa kune dzimwe nyika dzakanyanya kuoma. Saka ndakatarisa kune zvinyorwa zve3, Abu Dhabi yakaramba ichikosha. Iye zvino pandinofuratira, ndinoona kuti ndakaita chimwe chinhu chisingaenzaniswi kana ndichienzanisa nemararamiro angu muLahore, Pakistan. Ndakanga ndine nyanya uye zvakanga zvisiri nyore kuti ndiende kunze kweguta. Asi muUAE ndakabhururuka sechizvarwa. Ndaifamba ndiri ndoga kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe mukutsvaga basa. Yaiva nguva yeupenyu muupenyu hwangu.
Kufamba mumigwagwa yeUA E haina kumbobvira inonzwa sekuneta, sezvo zvivako zvinokwidziridzwa uye tsika zvave zvichingoita kuti ndifambe munzira yangu yose. Ndaida kufara nguva imwe neimwe asi pfungwa yekutya yakanga ichikwira mumusana wangu sezvo miitiro yangu yakanga isina kubereka. Kurasikirwa kwenguva nemari kwaityisidzira ini. Ndakasiya upenyu hwakagadzikana muPakistan mukunyatsofungisisa kurota kwangu. Ndaida kuva chikamu chevanhu vemarudzi akawanda kubva kwandinodzidza tsika dzakanaka dzedzimwe tsika uye kushandisa muupenyu hwangu.
Zvidzidzo zvangu zvaionekwa sechisiri chinhu muUAE ndakanga ndichiora mwoyo uye ndisina tariro. Zvese zvandaitarisira zvakanga zvichinyangarika pamberi pangu.
Sezvakataurwa kuti munhu anonaya achibata pamatavi, ndakaenda kune imwe kambani inoshandiswa nekutaridzirwa kwevanhu vangu. Munhu wandakatumidzwa naye aiva maneja wekambani uye aive muPakistani pamwe chete nehama dzake vakatamira kuUAE mu1980s. Vakatsvaga muUAE kuti vatize kuparadzwa kweGeneral Zia mutongi wemauto panguva iyoyo.
Iye zvino kudzokera kune kambani, yaive ichiita mubhizimusi bhizinesi. Inopa makirani kune zvivako zvekuvaka. Icho chiri kubudirira bhizinesi sezvo kuvaka hakuna kumbomira muUAE ndakasangana nemunhu akanga ari munyoro. Akandipa mutoro mundima yedhipatimendi rekambani. hofisi yayo yaiva muDhaibha, imwe yemusvingo mukuru iyo iyo yapamusoro yakanga isingaoneki kana ndikadzorera musoro wangu kuC90 degree zvakananga. Mukambani iyo shongwe yakanga iine 4 dzimba dzimba sehofisi yayo. Ikoko ndakasangana kwenguva yekutanga muupenyu hwangu chero Baloch (chivako chePakistan). Akange ari munhu akanaka kudaro. Akandigamuchira neni nemaoko ose. Zvose zvisiri izvo ndakanzwa pamusoro peBaloch. Pamwe munhu uyu aive pasi pesimba rehutsika hweUAE zvakare. Iyi ndiyo chaiyo yandakaona mumigwagwa uye mumigwagwa yeUAE & zvakare mumahofisi uye muupenyu hwehutano. Akanga akaita semudzidzisi wangu. Akandidzidzisa purogiramu yekugadzirisa inoshandiswa nekambani inogona kunge iri Peachtree, handiyeuki ikozvino. Icho chaive chiitiko chakanaka, vashandi vehofisi vainyanya kuPakistani maIndia mashomanana naPhillipinos. Ndinofanira kutaura nezvevanhu veUAE vachisarudza Phillipinos semusikana weimba yavo panguva iyoyo. Ndakanga ndisingazive kuti ndevaya vanovimbika kana basa rekushandisa mari, chaizvoizvo havana ruzivo.
Yakanga iri mazuva angu 4 muhomwe iyoyo. Ndakapiwa AED 2,500 mwedzi wose kubva kwavanenge vachibvisa AED 200 pamwedzi semari yevisa. Hugari uye kutakura kubva kubasa kuenda kuhofisi uye shure zvakapiwa nekambani. Ndakanga ndisingagutsikana neizvi, sezvo zvakanga zvisiri sezvandakatarisira. Kushanda kwemaawa kwakatanga kubva ku7 kusvika ku 7 masikati neawa 2 maawa masikati kupera kwaifanira kupedzwa muhofisi zvakare, sezvo pakanga pasina chinhu chekuita mukati mekupisa mukati mezuva.
Nokuti visa vakandikurudzira kuti ndibvise matampu kubva kune dzimwe nyika kupinda Keesh uye zvakare kupinda ne 2 makore basa rekuisa, rakanzi ndiyo tsika inowanzoitika. Nzvimbo dzekugara dzakanga dzimba ye studio muSharjah yakagoverwa ne12 vanhu, kwaingova nemadzimba ega e2 kune vose. Kwakange kusina kuvanzika zvachose. Hofisi yeHofisi yakanga yakarongerwa kuenda kuhofisi ku6 kuitira kuti ndiwane vani tinofanira kunge takagadzirira pamberi pe6 nekuda kwekuti taifanira kutarisira uye kutanga zuva musi we5 am. Kutanga kusvika pakutanga kutonga kusina kushandiswa pakushandiswa kwekugezera. Basa iri rakaoma rinoramba richitsamwisa ini uye sezvo ndakanga ndisati ndagutsikana nehupi, ndakaita kuti ndifunge kana kuti ndiwane kana nani kana kuti ndidzokere kuPakistan.
Handina kugutsikana nemamiriro acho ose. Pana 6 patinenge taenda kuhofisi inotora maminitsi e45 kuti tivepo. Yaiva bhiriji chete yatakafanira kuyambuka ndokupinda muArabic kubva Sharjah. Nemhaka yepamusoro peawa yamaawa maawa yaisashandiswa kuva nekumanikidza kumhanya zuva nezuva. Zvino sezvo ini ndakanga ndisina kugutsikana zvese zvandaiwana zvakanga zvisina kunaka. Zvose zvakanaka maonero eUAE akanga apera. Kune nguva dzose mitoro yatinofanira kutakura tisati tabudirira. Ndinofunga kuti ndakanga ndisina kukwana zvakakwana kuti ndinzwisise izvi. Chero paSvondo iro raive rokupedzisira rekushanda zuva revhiki ndakanga ndichida kupedza vhiki yevhiki nevana vangu muBud Dhabi.
Kudzoka kuAud Dhabi Ndakakurukura mamiriro acho ezvinhu nevana vangu vakagadzirira uye nemhuri yangu kudzokera kuPakistan. Mauto akaziva kuti izvi zvinoitika vakandipa kuti ndizvigare kwenguva yakati, zvinhu zvichava nani. Sezvakaitika muupenyu hwangu zvakare pamusoro pebasa rebasa ndakanga ndisingadi kuteerera, mhuri yangu zvakare muPakistan yakatsigira chisarudzo changu chekudzoka. Ndaifanira kutsvaga basa pandinodzoka, ndaida kuzviisa pangozi iyi nokuti ndaiziva mhuri yangu iri shure kwangu. Chimwe chete chakakosha uye kusiyana kukuru kwehupenyu muPakistan ne Dubai kwaiva mhuri. Mumwe munhu akati kana iwe uchida kuenda zvakananga enda woga asi kana iwe uchienda kwenguva yakareba enda pamwe chete. UAE yaiva rwendo rwangu rurefu. Ndakanga ndisingagadziri zvakakwana. Ndakasarudza kudzoka.
Gare gare mushure megore, ndakanzwa kambani yandakapiwa basa yakavharwa sezvo saka chisarudzo chekusiya chipo chakaratidzika zvakanaka. Mukufambira mberi nokukurumidza kwehupfumi semakambani eUAE anoshanda uye akavhara zvakafanana.
Pano ini ndinomanikidzwa kutaura mutyairi wekare mutakiti anobva kuPakistan muBud Dhabi, uyo akatarisa pamiti iri pa greenbelt yemugwagwa panguva yekutasva, kuti takadyara idzi nemaoko edu muRamadan nekutsanya. Ndinokwazisa ushingi hwomunhu akasarudza kusiya mhuri uye akaita basa rinokosha mukushandura kweUAE iyo iri ikozvino. Ndakadzoka mushure memwedzi ye2 yerwendo rwangu rwakaoma. Kunyangwe ndakawedzera nguva yangu yekudzokera kwetikiti kaviri mune tariro yekuwana chinhu chakakosha asi chakanga chiri pasina. Mushure mokudzoka kwangu handina kumbobvumira munhu anondibvunza pamusoro peUAE Ndaigara ndichifunga kuti ndiyo yakanga iri nguva yangu uye zvingasava yevamwe vose. Munhu wose anofanira kukurudzirwa kutora mukana wekurarama mararamiro avo. Ndangovaudza kuti zhizha haisi nguva yakanaka yekuvhima basa. Saka uronga kubva munaOctober kusvika munaMarch.
Pandinodzoka UAE yakanga ine rupo chaizvo kundipa chipo chekuremekedza uye kupa kune zvakare muhutano hwevashandi vanoenda kune dzimwe nyika vanonditendera zvakanaka, pasinei nezuva rekupedzisira rekushanda kwevisa. Vakatora nguva yekuvimbisa asi vakandibvumira kuti ndibve munyika ndichikudzwa.
Mushure memazana e11 ndinofunga kuti zvingave zviri nani kwandiri kuti ndigare asi zvakanakisisa kuti ndidzoke. Ndakatanga kuona hupenyu nehuwandu hwakajeka uye kugadzirisa. Ndakagadzira huzhinji hwehupenyu uye hwehutano hwehupenyu hwangu shure kwekudzoka. Ndinoziva kuti handigoni kuvhara mwedzi yangu ye2 yakazadza zviitiko zvekufamba mukati memazwi e5000 asi ndakanyora zvandakarangarira. Ndakanyora zvose kuti ndive chikamu chenhoroondo. Mumakore akawanda ari kuuya makore aya akanganwa anogona zvakare kudzokororwazve. Ndine chokwadi kuti nyaya yangu ichaverengwa sehurukuro nechidzidzo. Neizvi ndinogona kurangarirwa kunyange mushure mekunge ndisisipo. Zvinyorwa zvangu zvingandiita ini munyori wenhau dzakaitika uyo akaona UAE nemaonero akasiyana.
Ndinokutendai, UAE nguva dzose muchayeukwa semudzidzisi mukuru uye mutungamiri. Dai iwe uchigara uchinakisa uye uchizadza zviroto zvevanhu.
Rwendo rwebasa kuvhima chikamu 2 naAntony Raj Jayamani. Akakwanisa kutarisa nezve kutsvaga basa uye akakwanisa kuwana basa mumunda mumwe chete.